Iitekhnoloji zeTekhnoloji ezi-6 ngo-2020 Yonke iMarketer kufuneka yazi malunga | Martech Zone
Akusiyo imfihlo ukuba iindlela zentengiso zivela notshintsho kunye nezinto ezintsha kubuchwepheshe. Ukuba ufuna ukuba ishishini lakho ligqame, ungenise abathengi abatsha kwaye wandise ukubonakala kwi-Intanethi, kuyakufuneka usebenze malunga notshintsho lwetekhnoloji.
Cinga ngeendlela zobuchwephesha ngeendlela ezimbini (kwaye ingqondo yakho iya kwenza umahluko phakathi kwemikhankaso ephumelelayo kunye neekricket kwi-analytics yakho):
Nokuba uthabathe amanyathelo okufunda iintsingiselo kwaye uzisebenzise, ​​okanye ushiye ngasemva.
Kule nqaku, uya kufunda malunga neendlela ezintandathu zobuchwephesha kwi-2020. Ngaba ukulungele ukumilisela? Nazi izicwangciso kunye nezixhobo oza kuzifuna ukubetha umhlaba usebenze kulo nyaka.
Umkhwa woku-1: Intengiso ye-Omnichannel ayisekho ngokuzithandela, iyimfuneko
Kude kube ngoku, abathengisi banempumelelo egxile kwiindlela ezimbalwa zentlalo zokuthumela kunye nokuzibandakanya. Ngelishwa, oku akusekho kwimeko ka-2020. Njengentengiso yeshishini, awunalo ixesha lokuthumela umxholo kuwo onke amaqonga. Endaweni yokudala umxholo wesiko kwisitishi ngasinye, unga umxholo ophindaphindiweyo kwaye uyithumele kuwo onke amajelo. Oku akuyi kuqinisa kuphela imiyalezo yakho yohlobo, kodwa iya kugcina ishishini lakho lifanelekileyo kwaye libandakanyeke kuluntu lwakho oluku-intanethi.
Intengiso ye-Omnichannel yenza abaphulaphuli bakho ukuba batyelele amajelo akho ngaphandle komthungo. Isiphumo?
Ukuthengiswa kweendlela ezinqamlezileyo kufanelekile malunga ne-2 trillion.
Ngaba ukulungele ukubona intengiso ye-omnichannel isebenza? Jonga indlela umthengisi ophambili wase-US, Nordstrom, Isebenza ngentengiso enqamlezileyo:
Indawo yeNordstrom Twilley, Instagram, yaye Facebook Iiakhawunti zonke ziqulethe imveliso kunye nezinto ezikhuthazayo.
Xa abantu bebrawuza nayiphi na iakhawunti yemidiya yoluntu yaseNordstrom, banokuthenga izithuba ezibakhokelela kwiwebhusayithi yeNordstrom.
Nje ukuba bafike kwisiza, banokucwangcisa ukuqeshwa kwesitayile, ukhuphele usetyenziso lweNordstrom, kwaye ufumane ukufikelela kwinkqubo yokufumana umvuzo.
Intengiso ye-Omnichannel ibeka umthengi kumjikelo wamanzi womxholo, inkonzo yabathengi, ukuthengisa kunye nembuyekezo.
Umyalezo uphezulu kwaye ucacile:
Kwi-2020, kuya kufuneka ujolise kwintengiso ye-omnichannel. Ukunyuka kwentengiso yedijithali kunye nemithombo yeendaba kwezentlalo ibangele imfuno yezixhobo zokupapasha ezizenzekelayo. Ngeliphandle, abanini bamashishini kunye nabathengisi abanalo nje ixesha lokuthumela yonke imihla kumaqonga amaninzi.
Ngena: Ukudala umxholo, ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona kunye nezixhobo zokupapasha ezivela NeKwami. Awunakwenza kuphela umxholo, kodwa unokuguqula ubungakanani bayo buye kubungakanani obahlukeneyo njengezithuba ze-Instagram okanye imifanekiso ekwabelwana ngayo nge-Facebook ekuhambeni. Ibhonasi? Yeyazimahla. Kodwa akonelanga ukwenza umxholo kuphela, ufuna ukuyipapasha nayo.
Ukugcina ixesha, batch indalo yakho yokuyila kunye nemisebenzi yokupapasha kunye. Kwisihlalo esinye, unokwenza umxholo obonakalayo kunye neshedyuli yokupapasha ngokuzenzekelayo kwisitishi ngasinye. Ngokubeka ubungakanani kwakhona kuyilo ekuhambeni nasekushicileleni ngokuzenzekelayo umxholo ngonqakrazo olulula lwempuku, ugcina ixesha, imali kwaye ugcine uphawu lwakho lufanelekile.
Intengiso ye-Omnichannel ilingana nobukho be-intanethi kwi-intanethi, kwaye olo lutshintsho lwetekhnoloji ye-2020 ongenakuyityeshela.
Umkhwa 2: Ixesha elizayo lokuThengisa ngeVidiyo
Ukuthengisa ividiyo ligama eliyintsingiselo mva nje, kodwa ngaba kufanelekile ukuba ubekho? Ukuthathela ingqalelo ukuba ngaphezulu kwesiqingatha sabantu abakwi-intanethi babukela iividiyo yonke imihla, ngokwezibalo zentengiso yevidiyo ukusuka HubSpot, Ndingathi yinto evakalayo ewe. Loluphi uhlobo lomxholo abantu ababukeleyo? I-YouTube ayisalawulwa njengentengiso yevidiyo ye-Facebook, Amabali e-Instagram kunye nokuPhila kukhula ngokuthandwa.
The Isitshixo sokuthengisa ividiyo esebenzayo kukuzenzela. Abantu abanamdla wokubukela iividiyo ezipholishwe kakhulu. Endaweni yoko, banqwenela umxholo wevidiyo ohambelana nomdla wabo. Iividiyo ezinobungakanani yindlela elungileyo yokunxibelelana nabaphulaphuli bakho kunye nokwabelana ngecala elisondeleyo ngakumbi lwegama lakho.
Kwaye ungakhathazeki, awudingi videographer yobungcali ukwenza umxholo wevidiyo obandakanyekayo. Unokwenza ngokulula ukwenza iividiyo ezifanelekileyo kunye nokuzibandakanya ukusuka ekuqaleni, okanye ukusuka Iitemplate zevidiyo kwiPosterMyWall. Yenza iividiyo ukuze zilungelelanise umyalezo wakho wophawu, ukukhuthaza ukwaziswa kwemveliso okanye ukwazisa abaphulaphuli bakho ngeendaba zenkampani.
Nantsi indlela ekulula ngayo ukuPosta iMyWall:
Bhrawuza iitemplate zevidiyo ukuze ufumane enye elingana nethoni kunye nomyalezo wegama lakho
Cofa kuyilo ukwenza ngokwezifiso itemplate
Sebenzisa umhleli ukwenza ikopi ngokulula, imibala, iifonti kunye noyilo
Yabelana ngevidiyo ngokuthe ngqo kwiitshaneli zakho zentlalo ezivela kwiPosterMyWall
Kumanyathelo amane alula, unevidiyo enophawu lokwabelana! Ngokufutshane, ukubandakanya umxholo wevidiyo, uzigcine uphambili kwingqwalaselo yabaphulaphuli bakho, kwaye yindawo entle ukuba ube kuyo.
Umkhwa wesi-3: Yenza iimveliso zifumaneke kwindawo yentengiso kaGoogle
Utshintsho olutsha lwetekhnoloji ibe sisihloko sengxoxo enkulu kubathengisi: ukutyhala iimveliso kwindawo yentengiso kaGoogle. Abachasayo bathi batyale imali eninzi ekwakheni iwebhusayithi evuselelayo ebonisa uphawu lweshishini labo kunye nokuzazisa. Ukutyhala iimveliso kuGoogle kususa ithuba lokuba iindwendwe zimangaliswe kwindawo yazo egqibeleleyo. Isiphumo? Ukwehla okukhulu kwezithuthi zewebhu.
Kuya kufuneka ujonge ngaphaya kwale metric ukuze ubone umfanekiso omkhulu apha. Ngaba uyafuna ukuthengisa? Okanye ngaba ufuna ukuba newebhusayithi ekundwendwelwe kakhulu kuyo? Ewe ufuna intengiso, kodwa awunayo intengiso enye, ufuna ukuphinda, abathengi abathembekileyo, yiyo loo nto uyenzile iwebhusayithi entle, akunjalo? Kunene.
Endaweni yokujonga indawo yentengiso kaGoogle njengokufa kwewebhusayithi yakho, yicinge njengelinye ijelo lokuzisa ulwazi malunga negama lakho. Ngelixa ezinye iimveliso zilahla kwityala lokutyhala iimveliso kuGoogle kunye nokuphulukana nokugcwala, ungangena kwaye udwelise iimveliso zakho, uthengise, kwaye ukhulise uphawu lwakho.
Inyani yokuba ungadwelisa iimveliso zakho oza kuzithengisa ngoGoogle kwimizuzu nje embalwa yenza ukuba kube lula (kwaye simahla!) Isixhobo sokuthengisa ongenakukwazi ukusihoya.
Nantsi indlela onokuyenza ngayo:
Okokuqala, yiya kweyakho Iakhawunti kaGoogle yeShishini lam, apho ungadwelisa khona iimveliso zakho, iinkcukacha zemveliso, ukongeza imifanekiso kwaye uqale ukuthengisa ngaphakathi kwemizuzu. Ewe kunjalo, uya kufuna ukomeleza igama lakho lophawu, ukuthumela imiyalezo kunye nokufaka uphawu kwiwebhusayithi yakho kunye namajelo eendaba ezentlalo. Intsingiselo, awufuni ukuphosa i-hodgepodge yoluhlu lweemveliso ezingcolileyo. Phatha indawo yentengiso kaGoogle ngendlela efanayo nevenkile yakho ekwi-intanethi kwaye ubeke ingcinga kwimifanekiso, ikopi kunye neenkcazo zemveliso.
Umkhwa 4: I-SERPS Favor Schema Markups kunye ne-Rich Snippets
Ukuthengisa kwidijithali ngokungathandabuzekiyo kuxhomekeke kwi-SEO (ukuSebenzisa iiNjini zoKhangelo). Ngo-2020, kuyakufuneka wenze ngaphezulu kokukhetha amagama aphambili ekujolise kuwo kunye nokusebenzisa isicatshulwa somfanekiso ukuzisa ukugcwala kwewebhu. Ewe usadinga ukusebenzisa ezona ndlela zintle ze-SEO, kodwa ngoku kuya kufuneka uthathe inyathelo eliya phambili kwaye wenze iziqwengana ezityebileyo ngeSchema Markups.
I-snippet ecebileyo iqulethe i-microdata, ebizwa ngokuba yi-Schema markup, echaza ngokucacileyo iinjinjini zokukhangela malunga nephepha ngalinye lewebhu. Umzekelo, xa ufaka "umenzi wekofu" kwibar yokukhangela kaGoogle, zeziphi kwezi ziphumo ocinga ukuba abantu banokucofa kuzo:
Inkcazo yemveliso ecacileyo, ixabiso, ukulinganiswa kwabathengi, kunye nokuphononongwa
Inkcazo yemeta engacacanga etsalwe ngokungahleliwe kwiphepha, akukho mlinganiselo, akukho xabiso, akukho lwazi
Ukuba uqikelele ukhetho lokuqala, uchanekile. Ngo-2020, zonke iinjongo eziphambili zokukhangela, kuquka iGoogle kunye ne-Yahoo!, Qaphela i-schema markups kunye ne-snippets ezizityebi xa utsala ii-SERPs (iiNjini zoPhando lweZiphumo zeNjini).
Ungenzani? Unokukhetha ezimbini: sebenzisa Schema.org ukudala oonomadudwane abatyebileyo, okanye uthathe ithuba esi sixhobo sasimahla sivela kuGoogle. Ngoku, iphepha ngalinye lemveliso yakho ligcwele ulwazi olufanelekileyo, olonyusa ukubonakala kweshishini lakho.
Umkhwa wesi-5: I-AI iya kuququzelela ubuGcisa obuNtsingiselo
Ngaba kuvakala ngathi yi-oxymoron? Ngandlela thile, kunjalo, kodwa oko akukunciphisi ukubaluleka kwayo. Xa sixoxa ngokwenziwa kwakho kwindawo yentengiso, sivavanya iindlela zokubonelela ngamava abaluleke ngakumbi kumthengi.
Mandiyicacise: I-AI ayizukuhlambalaza uphawu lophawu xa isetyenziswe ngokuchanekileyo. Endaweni yoko, iya kuthi incede ekudaleni amava okonwaba ngakumbi kunye nawenkonzo yabathengi. Emva kwayo yonke loo nto, abathengi badiniwe yimithombo yeendaba engenguye umntu. Xa uqwalasela inyani yokuba imithombo yeendaba ekuyo yonke indawo iyabafaka I-5,000 iintengiso ngosuku, Kulula ukubona ukuba kutheni bediniwe. Endaweni yokongeza kwingxolo, unokusebenzisa ngobuchule i-AI ukukhusela amava awenzelwe ngokwakho.
Ngotshintsho kwitekhnoloji kunye nokungena kwesoftware ye-AI, abathengisi banokufikelela kubathengi babo kwinqanaba elisondeleyo. Enye yeendlela ezilungileyo onokuzisebenzisa ukuze ufumane ubuqu kukuqokelela idatha malunga nokuba ngowuphi umxholo abawuthandayo.
Vavanya ngononophelo uhlalutyo lwakho lwewebhusayithi kunye nokuqonda kweendaba zosasazo. Zithini iipateni? Useke ii-personas zabathengi ukwenza uphawu kunye nemifanekiso ethetha nabo. Okwangoku, ayonelanga ukuba ufuna unxibelelwano lwangempela kumthengi.
Kungenxa yoko le nto iimveliso eziphambili zisebenzisa i-AI kuba ngayo…
INetflix inokuqikelela ukuba umsebenzisi ngamnye ufuna ukubukela ntoni ngokusekwe kwimbali yakhe.
Ngaphantsi kwabathunywa beArmor irejimeni yempilo esekwe kubasebenzisi bokutya, ukulala kunye nemikhwa yempilo.
Iincoko zingabuza iindwendwe kwiphepha lakho leFacebook ukuba zifuna uncedo lokufumana imveliso ethile okanye inkonzo.
Okukwintsusa: ukufumana i-hyper-personal kunye nabathengi bakho kwi-2020, uyakufuna uncedo oluncinci kwi-AI.
Umkhwa we-6: UkuKhangela kwelizwi akuyi kuyitshintsha indawo yokuBonwa
Ukunyuka kokukhangela kwelizwi kunentengiso eguqula ubuninzi bomxholo ofundekayo kwifomathi yelizwi yeinjini yokukhangela. Ukukhangelwa kwelizwi kuqhelekile kwiradar yomntu wonke, kwaye kufanelekile:
Isiqingatha sokusetsha siza kwenziwa ngokukhangelwa kwelizwi kwi-2020.
Mhlawumbi licebo elilungileyo lokujolisa ingqalelo yakho kukhangelo lwelizwi, kodwa ngokwenza njalo, ungenzi impazamo yokucinga ukuba umxholo obonwayo sisonka sosuku. Ngapha koko, ichasene kakhulu. Ufuna ubungqina? Ibizwa ngokuba yi-Instagram, kwaye injalo I-1 ibhiliyoni yabasebenzisi abasebenzayo ukusukela ngoJanuwari 2020.
Abantu ngokungathandabuzekiyo bathanda umxholo obonakalayo. Kutheni bengayi? Ngokubonwayo, banako:
Funda izakhono okanye ulwazi olufanelekileyo kwimidla yabo
Zama iiresiphi ezintsha okanye wenze ubugcisa kunye nemisebenzi yezandla
Bukela iividiyo ezonwabisayo nezifundisayo
Fumana iimveliso ezintsha kunye neemveliso
Ngelixa ukubaluleka kokuthengisa okubonakalayo kungakhange kuguquke kwi-2020, ukufika kweekhonsepthi ezinokulukuhlela abathengisi kude nokwenza umxholo obonakalayo. Oku ngokuqinisekileyo kuya kuba yingozi. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukubandakanya umxholo obonakalayo okhethekileyo kuzo zonke iindlela zakho zokufikelela.
Ukukunceda, iPostMyWall igcwele ngokupheleleyo ngomfanekiso mathala eencwadi, itemplate zevidiyo, namawaka itemplate eyilwe ngobuchule. Ngale software yoyilo yasimahla, unokwenza ngokusesikweni iitemplate ngokutshintsha iitekisi, imibala kunye nemifanekiso ukuze utshatise uphawu lwakho. Okanye, unako ukwenza iiposti zemidiya yoluntu, imifanekiso yebhlog, imifanekiso ehambelana nemveliso kunye neeasethi zokwazisa ukusuka ekuqaleni kunye nesoftware ekulula ukuyisebenzisa.
Ungalibali ukuphinda ubeke ezi zinto zibonwayo kwisikhonkwane sentengiso yakho ye-omnichannel. Umzekelo, unokwenza iposti yebhlog kwaye uyenze ubungakanani kwakhona ibe yipini yePinterest okanye iposti ye-Instagram kunye ne-voila, unomxholo obonakalayo omangalisayo weendlela ezininzi!
Yenza iinguqulelo zeTekhnoloji zisebenze kuwe
Kwi-2020, kuyakufuneka wenze inethi ebanzi ukuzisa abathengi, ukwakha ulwazi malunga nebrand kunye nokukhulisa ishishini lakho. Ukwenza oko, kubalulekile ukuba uhlale ubhetyebhetye kwaye uphambili kwendlela. Isitshixo sokuthengisa umxholo kukuziqhelanisa, njengoko abarhwebi bengavumi ukutshintsha umngcipheko wentengiso eguqukayo ngaphandle kwabo. Okukhona uvulekileyo kwaye unokuthatha amanyathelo kutshintsho lobuchwephesha, kokukhona ungazisebenzisela inzuzo yakho. Kwaye xa usenza ntoni? Ewe, akukho nto inokukunqanda!
tags: iindlela zentengisoomnichanneliindlela zetekhnolojiiintsingiselo